Iindlela ezili-10 ze-Ecommerce eziya kubona uzalisekisiwe ngo-2017 | Martech Zone
Kwakungekho kudala kakhulu ukuba abathengi babengenako ukonwaba ukufaka idatha yabo yamakhadi etyala kwi-Intanethi ukuze bathenge. Abakhange bayithembe indawo leyo, abakholwanga yivenkile, abakhange bathembe nokuhanjiswa… abakhange bathembe kwanto. Kwiminyaka kamva, nangona kunjalo, kwaye umthengi ophakathi esenza ngaphezulu kwesiqingatha sazo zonke izinto abazithengayo kwi-Intanethi!
Idityaniswe nomsebenzi wokuthenga, ukhetho oluncomekayo lwamaqonga e-ecommerce, unikezelo olungapheliyo lweendawo zokuhambisa, kunye nomqobo ophantsi elunxwemeni ekungeneni… i-ecommerce iyaphakama kubunkunkqele kunye nokukhula. Ukugcina oko engqondweni, kubalulekile ukuba ungajongeli phantsi malunga nendlela oza kwahlula ngayo ivenkile yakho kwi-intanethi.
SSL2Thenga, Umboneleli we-SSL wehlabathi, uze neendlela ezilishumi ze-eCommerce zokujonga ngo-2017 eziqulunqwe kule infographic intle:
Ukuphela koLwesihlanu oMnyama kunye noMvulo weCyber -Kuba awudingi ukushiya isilili sakho kwaye ulwe emigceni, i-ecommerce iyalinciphisa ifuthe kwezi ntsuku zentengiso kunye nokuziphatha kokuthenga kusasazeka kwinyanga yonke Ngomhla kaNovemba.
Amava oThengiso aBodwa naDynamic -Iipulatifti ezilandelela izigqibo zokuthenga kunye nokuziphatha ekugqibeleni zichanekile kwaye zinokunceda kwiivenkile ezikwi-Intanethi zibonelele ngokuziphatha okucwangcisiweyo okunciphisa ukuxabana kokuthenga kunye nokubonelela ngezindululo zemveliso abathengi abayifunayo ngokwenene.
Abathengi baya kusebenzisana neArtificial Intelligence -Ukuthenga, ukubhukisha, kunye neencoko zenkonzo yabathengi ziya kuba ngokuchanekileyo nangokufanelekileyo ziphendula imibuzo yokuthenga kwi-Intanethi, ukuphucula amava e-ecommerce, ukubandakanya abasebenzisi, kunye nokuziqhuba ukonyusa ixabiso leenqwelo zokuthenga ngelixa unciphisa ukulahlwa.
Ukuqikelela ngokuchanekileyo ukuThengwa okulandelayo koMthengi -Ukwazi ukuqokelela kunye nokuhlalutya idatha enkulu kubonelela ngokuchanekileyo ngokuqikelela kunye neemodeli zokuxelwa kwangaphambili ezisetyenziselwa ukubeka unikezelo phambi komthengi ngalo mzuzu bayifunayo.
Yenza amava eselfowuni alunge kangangoko Iselfowuni igqithile kwidesktop kubathengi abakwi-Intanethi abakhangela kunye nokuphanda isigqibo sabo semveliso esilandelayo. UGoogle ubonelela ngezalathiso ezizodwa zeselfowuni ezifuna amashishini ukuba athathe indlela yokuqala yokuhambisa indawo yabo ye-e-commerce.
Yonyusa ukuhanjiswa kwemini enye - Iipesenti ezingama-29 zabathengi bathe bazokuhlawula ngaphezulu ukuhanjiswa kwemini enye Akumangalisi ukuba kutheni iinkokheli ezinje ngeAmazon zizise le nkonzo kwintengiso, zisaqhubeka nokuhambisa isidingo sokundwendwela ivenkile ekufuphi.
Ukuthengisa kwezentlalo -I-70% yabathengi baphenjelelwa zizincomo zohlobo kunye nemveliso kumajelo asekuhlaleni Ukungena kwimithombo yeendaba zentlalo ukonyusa ulwazi lwentengiso kunye nokukhuthaza ngoku kuqhuba ukuthengisa, kukhuthaza abathengisi ukuba baphuhlise izicwangciso-qhinga zentlalo ze-omni-channel.
I-HTTPS efunekayo ngo-2017 -Ngaphandle koqhagamshelo lwe-SSL, abathengi kunye nabanikezeli nge-ecommerce basesichengeni sokufumana idatha ebiweyo okanye iinkqubo ezigqekejiweyo. UGoogle sele eqinisekisile ukuba i-SSL ingenisiwe kwizikhundla ze-algorithms, lixesha lokuba ukhusele yonke indawo onayo apho kuqokelelwa khona okanye kudluliswa idatha.
Ukuthengisa i-omni-channel Abathengi beMultichannel bachitha ngaphezulu kwamaxesha e-3 ngaphezulu kwesitishi esinye esithengisa abathengisi ukuba baphuhlise imikhankaso enzima elandela abathengi abanokubakhokelela ekuthengeni nokuba bakwivenkile, iselfowuni, okanye naphi na phakathi.
Ukuthengiswa kwakhona kwemveliso - Ngokomndilili, ifuna amanqaku asixhenxe ngaphambi kokuba ukhokele umthengi emva kokumaketha ngoku sisicwangciso esilixabiso kuyo yonke intengiso ye-ecommerce.
Qiniseka ukuba uqwalasela ezi zinto zibalulekileyo ngelixa usenza eyakho Isicwangciso sentengiso se-ecommerce 2017.
tags: kukubhadla okungeyonyaniidatha enkuluULWESIHLANU omnyamakwi-cyber mondaykweenkonzoUkuthenga okunamandlaI-ecommerce infographicimikhwa ye-ecommercehttpskwi-infographicUkuthenga ngeselulaukuthengisa ecommerceumjelo othengisaukumakethaukuhanjiswa kwangolo sukuyobaukuthengisa kwezentlaloUkuhambisa ngenqanaweezivenkileniamava okuthengaezentengisoezentengisoukuthengisa kwezentlaloSSL
Iindlela ezili-10 zabaThengi ngo-2017… ngesilumkiso!